Iinkqubo zeBentley zoNyaka kwiNkomfa yeZiseko zoPhuhliso kunye namaBhaso aya kubanjelwa eLondon-eGeofumadas
I-Bentley Systems 'yoNyaka kwiNgqungquthela yokuPhulwa kweNkcazo kunye neMigangatho iya kubanjelwa eLondon
Matshi, 2018 ezintsha, Microstation-Bentley
Ingqungquthela yaminyaka yonke idibanisa iinkokheli zehlabathi kwiziseko zophuhliso, ukuyila, ukwakhiwa kunye nokusebenza ukwenzela ukuba ufunde iindlela ezifanelekileyo zokuba yinkwenkwezi yedijithali yinyani.
I-EXTON, ePennsylvania-Matshi-20, Matshi-2018-I-Systems Incorpised, umboneleli okhokelayo wezisombululo ze-software ezigcweleyo zokuqhubela phambili kweziseko zophuhliso, wabhengeza namhlanje ukuba unyaka kwiNkomfa yeZiseko zoNcedo 2018 uza kubanjwa ukusuka nge-15 ka-Okthobha ukuya nge-18 eLondon eLondon. kwi-Londonton Metropole.
Eboniswe yi-Bentley Institute, inkomfa yimbutho yehlabathi ehamba phambili nabaphathi bezoshishino kunye neenkokheli zeenkokheli ezikhokelayo ekwakheni, ekwakhiweni nasekusebenzeni kweziseko zophuhliso jikelele. Umxholo wale ngqungquthela yonyaka u-Digital Digital: Uphuhliso kwiZiseko (Ukuhamba kwi-digital: Ukuphucula kwiziseko ezingundoqo).
Le nkomfa anayo malunga bathetha 70 50 kunye namajelo ngakumbi, izifundo leengcali kuquka iinkokeli kushishino, oomasifundisane enonxibelelwano, amaqonga, iingxoxo eziphakam kunye nemiboniso imveliso. Inxaxheba mabavule i-Technology inkundla, obonakalisa izinto imiboniso kunye nemiboniso evela Bentley Systems kunye namaqabane ayo ngobuchule Microsoft, Siemens, Topcon kunye Bureau Veritas.
Ngosuku lokuqala nkomfa, Bentley Institute uya kusingatha oqeqesho isiganeko Avance Digital, kunye imiboniso kunye neengxoxo interactive kunye neengcali kwi yobuciko brindaránn iimbono kunye nezenzo ezigqwesileyo kwiindawo zabo yobungcali, ezibandakanya imifuziselo ngokoqobo , izicwangciso BIM kunye nolwakhiwo.
Le nkomfa ikwabandakanya ukukhethwa kunye nokubhengezwa kwabo baphumeleleyo kwiMbasa ye-Bentley kwiZiseko zoNcedo lweZiseko zoNyaka i-2018 (ngaphambili eyayibizwa ngokuba yi-Be Inspired Award), ethi ihlawule kwezo projekthi zingaqhelekanga zabasenzi ezenziwa ngabasebenzisi beesoftware zeWindows.
Ngexesha lezintlu ezintandathu ezijolise kumzi-mveliso ezizakuboniswa ngexesha lenkomfa-Izakhiwo kunye neKhampasi, iziXeko zeDijithali, iZiseko zoMzi-mveliso, Uloliwe kunye noHambo, iiNdlela kunye neeBhuloho, kunye nezixhobo kunye naManzi-abagqwesileyo bokufumana amabhaso abayi-55 baya kuzisa iiprojekthi zabo kwiiphaneli ezizimeleyo. Yokwangaphezulu kwe-100 yamalungu eendaba kunye nababekhona kwinkomfa.
Ukususela kule ntetho, abaphumeleleyo bakhethwe ngamalungu ejury, kwaye i-18 yo-Oktobha iya kubhengezwa ekupheleni kwenkomfa ngexesha lomkhosi kunye nemini ye-gala.
U-Aret Garip, umlawuli wezobuchwepheshe we-WSP, owaya kwiNgqungquthela yaseBentley ngonyaka odluleyo eSingapore njengommeleli weprojekthi eyodwa ye-Blackfriars eyenziwa nguWSP eLondon kwaye owakhethwa njengomgcini weewadi wathi:
«Ingqungquthela ibisikhuthaza ngokwenene kwaye isifundisa. Ngumthendeleko omkhulu ukufunda malunga netekhnoloji yakutshanje yoyilo lwesoftware kunye nethuba lokudibana nabantu abanobuchule nabanobukrelekrele abaphuhlisa izixhobo ezintsha ukwenza kube lula kuthi ukuyila izakhiwo ».
Ngo-Oktobha we-2019, iNyaka kwiNgqungquthela yeNgqalasizinda iya kubuyela kwiNgqungquthela yaseMarina Bay kunye neSiboniso seSingapore.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga noMnyaka kwiZibonelelo ze-2018 kunye ne-Awards, tyelela
Bentley Systems ihamba phambili kwihlabathi ekunikeni izisombululo ezihlanganisiweyo phambili software lokuyila, lokwakha nokusebenza ngeziseko zophuhliso ngenxa iinjineli, abakhi, iingcali geospatial, abakhi, kwaye umnini-abaqhubi. abasebenzisi Bentley basebenzisa ekuhanjisweni ulwazi kumacandelo wonke umjikelo wobomi iiprojekthi zezibonelelo kunye nempahla ukuba ahlangule ukusebenza ngcono. izisombululo Bentley ziquka izicelo modeling ulwazi MicroStation, iinkonzo kusebenzisana ProjectWise ukunikezela iiprojekthi kunye neenkonzo imisebenzi ezihlangeneyo AssetWise ukuphumeza iziseko okrelekrele, intw 'iinkonzo ilawulwa ezibanzi eziqhutywayo izicwangciso impumelelo isiko.
Eyilwe kwi-1984, iBentley inabasebenzi abangaphezu kwama-3,000 kumazwe angama-50, ngaphezulu kwe-$ 600
izigidi zengeniso yonyaka, kwaye, ukususela kwi-2011, ityala imali engaphezulu kwe-$ 1 billion
uphando, uphuhliso kunye nokufumana. Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga neBentley, tyelela i-www.bentley.com.
Malunga noNyaka kwiNkqubo yeeNkxaso zeZibonelelo
Ekubeni 2004 woNyaka inkqubo Awards Infrastructure (eyayisaziwa ngaphambili ngokuba Awards iphefumlelwe) iye yabonisa ukugqwesa kunye ezintsha kuyilo, ukwakhiwa kunye nemisebenzi phezu iiprojekthi zezibonelelo 3.200 ehlabathini lonke. Le Unyaka kwiprogram Awards Iziseko iyodwa; kuba ukhuphiswano kuphela elolu hlobo ukuba lunqgukuva ngokobubanzi kwaye ziquka iindidi yonke, iquka zonke iintlobo iiprojekthi zezibonelelo. KwiNkqubo Awards, leyo luvuleleke kubo bonke abasebenzisi software Bentley, iiphaneli elizimeleyo noochwephesha kwezoshishino abakhetha kankqoyi na kudidi ngalunye. Tyelela iwebhusayithi Unyaka Awards Infrastructure ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe ngale nkqubo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Isitoreji se-intanethi yezithuthi zokugcina izixhobo
Post Next Zonke iindaba ezivela kwi-QGISOkulandelayo »